Interview : मरेकाले जल्ने अधिकार गुमाएको हेर्न सकिनँ : रेखा थापा | News Filmy
भन्दै थिए लास जलाउन दाउरा किन्ने पैसानै भएन
फरक काम र शैलीका कारण बेलाबेला चर्चामा आउने अभिनेत्री रेखा थापाले यसपटक भूकम्प पीडित माझ पनि बेग्लै उपस्थिति जनाइन् ।
पशुपति आर्यघाटमा आफन्तको दाहसंस्कार गर्न नसकेकालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै उनले सहयोगको बेग्लै पाटो उजागर गरिन् । एक पोका चाउचाउ दिएर फोटो खिचाई फेसबुकमा छाउन खोज्ने कतिपय सेलिब्रेटीलाई पाठ पढाउँदै उनले भनिन्, ‘अरूको समवेदना माथि खेलबाड गर्नुहुँँदैन, पाप लाग्छ । ’ प्रस्तुत छ महाभूकम्प माथि केन्द्रित भई राजन घिमिरेले रेखासँग गरेको कुराकानी ।
भुइँचालो आउँदा तपाईं कहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो ?
जीवनमा यस्तो भुइँचालो भोग्नु पर्ला जस्तो लागेको थियो ?
यसपटकको भुइँचालोबाट के शिक्षा पाउनुभयो ?
कतिपय कलाकर्मी त चाउचाउ र कुचो लिएर फोटो खिचाई मिडियामा छाउँदा तपाईंचाहिँ सामाजिक सञ्जालमा देखिनुभएन नि ?
आर्यघाटतिर लाग्ने सोचचाहिँ कसरी आयो नि ?
सिङ्गो चलचित्र समूहसँग मिलेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो, किन एक्लै गर्नुभयो ? यसो गर्दा तपार्इंलाई घमण्डी पनि भने नि कैयनले ?
– भन्नेको मुख थुन्न सकिन्न । मलाई पीडा सहने, व्यथा बुझ्ने र दुःखमा परेकाहरूले आशीर्वाद दिनुभएको छ । दुई–चारजनाले घमण्डी भन्दैमा केही हुँदैन । यतिबेला समूह बनाएर कामभन्दा प्रचारको हौवा पिटाउने नभई अगाडि आएको विपत्तिको सामना वा सहयोग गर्नु अपरिहार्य छ र यही सोचका साथ म आफू खुसी उत्रिएकी हुँ । मलाई लाग्छ– मैले आफ्नो बुद्धि–विवेकले क्षमता अनुरूप सहयोग गरेँ । म सहयोग गर्ने संस्था वा समूह बनाउँदिनँ पनि । अगाडि जे छ र जसरी गर्न सकिन्छ त्यसरी सहयोग गर्छु ।
प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो क्यारे, कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो ?
राहत र उद्धारको मामलामा सरकार कमजोर देखियो पनि भन्छन् नि, तपाईंलाई के लाग्छ ?
अब के छ नि तपाईंको योजना ?
– अहिले चलचित्र सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने या फिल्म खेल्ने मुड छैन । अब काजकिरिया गरेर बस्नुभएका पीडित नेपालीमाझ पुग्ने योजना छ । यो भूकम्पले नेपालीलाई एक बनाएको छ । मानिसको जीवन खासै केही होइन रहेछ । बाँचुञ्जेल साथ, सहयोग र आपसी सद्भाव हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यो भूकम्पले दिएको छ । सबैभन्दा ठूलो त राष्ट्रियता हो भने भावना प्रत्येक नेपालीको मन र दिमागमा छिरेको छ । देश टुक्र्याउने र जातीयताको रूपमा भिडाउन खोज्ने नेताहरूले नराम्ररी शिक्षा पाएका छन् । दुःख पर्दा आखिर जातीयता र सङ्घीयताको मतलब होइन प्रत्येक नेपाली एउटै हुँदारहेछन् भन्ने सकारात्मक शिक्षा पनि मिलेको छ । एउटा नेपालको पीडा र व्यथा अर्को नेपालीले बुझ्नुपर्छ, त्यसमा जातभातको कुरा हुँदैन रहेछ भन्ने शिक्षा मिलेको छ । एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको आँसु पुछ्ने र नेपाली–नेपाली जुटेका छन् । जे भयो अब भइसक्यो, त्यसकारण विगतलाई सम्झेर मन र दिमाग गलाउनुभन्दा अब नयाँ बाटो, बिहानी र उद्देश्यका लागि एक भएर अगाडि बढ्नुपर्र्ने अवस्था आएको छ । सबै एक भएर हात मिलाउँदै अगाडि बढौँ ।
साभार : घटना र विचार